Uyini umehluko phakathi kweWPC nePVC floor? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Uyini umehluko phakathi kweWPC nePVC floor?
I-WPC isho izinkuni ezakhiwe ngamapulasitiki, izinkuni zepulasitiki zokhuni. Zingenziwa ngePVC / Pe / PP + ipoda.
I-PVC yipulasitiki ye-polyvinyl chloride, futhi ukufakwa phansi kwePVC okujwayelekile kungenzeka kungangezi ufulawa wokhuni.
Ukufakwa nokwakhiwa: Ukufakwa kwesisekelo se-WPC kulula futhi kulula, futhi akudingi izinqubo eziyinkimbinkimbi zokwakha, esonga kakhulu isikhathi sokufaka nezindleko; Ukufakwa phansi kwesisekelo sePVC kushesha kakhulu, akudingeki nosimende nosimende, futhi izimo zomhlaba zilungile Unamathela okhethekile onemvelo wokuzibopha, kepha izidingo eziphezulu zesisekelo sokwakha.
Iphansi le-PVC liyasaba ukushiswa kukotshwa kagwayi namathuluzi abukhali; phansi iWPC inokumelana nomlilo okuhle, ingakwazi ukubuyisa ngokuphumelelayo, isilinganiso somlilo sifinyelele ezingeni le-B1, ukuzicima uma umlilo, futhi kungakhiqizi igesi enobuthi.
Isisekelo se-PVC siyinto engeyona eyemvelo, kubhekiselwa esitezi esikhiqizwe nge-polyvinyl chloride impahla. Ngokukhethekile, kukhiqizwa kusetshenziswa i-polyvinyl chloride ne-resin ye-copolymer yayo njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko, ukungeza izinto zokusiza, nokusebenzisa inqubo yokuhlanganisa noma ikhalenda, ukukhipha, noma inqubo yokufaka ekhasini elingafani nanjengeshidi. Ukufakwa phansi kwe-WPC okwenziwe ngokhuni okwenziwe ngopulasitiki kuyindlela entsha yokusebenza okuphezulu, okuhlanganiswe ngenani eliphezulu eyenziwe lapho kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene zokubumba ngamapulasitiki ahlukahlukene ngemuva kokulungiswa kahle.
Iphansi le-PVC linokuhle okusebenzayo kwe-thermal, dissipation yokushisa okufana, kanye ne-coeffnty encane yokwanda, okuzinzile. I-WPC floor conductor abampofu, uma izinga lokushisa langaphandle lishintsha, khona-ke ukushisa kwangaphakathi nokulingana kungalingani, kulula ukubangela ukunwetshwa nokuqhekeka kokuqothuka, njll., Ngaphansi kwesikhathi eside kuzofushanisa impilo yaphansi yokhuni-yepulasitiki
Uyini umehluko phakathi kweWPC nePVC floor? Okuqukethwe okuhlobene